အသဲယားစရာ အမူအယာလေးနဲ့ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အသဲယားစရာ အမူအယာလေးနဲ့ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဗီဒီယိုလေး
အသဲယားစရာ အမူအယာလေးနဲ့ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဗီဒီယိုလေး
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် တဲ့ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ မျက်နှာ လေးနဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရွှေမဘုံ ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေး တစ်ယောက် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော် ။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု အများဆုံး ရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ ဆိုရှယ် media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက် စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရ ပါ တယ် ။
အခုမှာ တော့ ခက်မိုက်မိုက် ပုံစံလေး နဲ့ ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေမဘုံ တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ က တော့ လတ်တ လော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမျိုးသား တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာ တဲ့ မော်ဒယ်လ် အမိုက် စားလေးဖြစ် ပါ တယ် ။ ပရိသတ်တွေ တွက် ရွှေမဘုံ ရဲ့ အလန်စား ဗီဒီယိုလေး ကို မျှ ဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္း တဲ့ မ်က္ႏွာ ေလးနဲ႔ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ေလး ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ေရႊမဘုံ ဆိုတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး တစ္ေယာက္ ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာကကို ဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ားအျပားရဲ့ တစ္ခဲနက္ အားေပးမႈ ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိထားတဲ့ သူမကေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းၿပီး ဆက္ဆီ က်က် အမိုက္ စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေရ ပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ရွိ တာေတြ႕ရ ပါ တယ္ ။
အခုမွာ ေတာ့ ခက္မိုက္မိုက္ ပုံစံေလး နဲ႔ ရိုက္ထား တဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေရႊမဘုံ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူမ က ေတာ့ လတ္တ ေလာ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အမ်ိဳးသား ေတြရဲ့ ဝန္းရံျခင္းကို ခံေနရတာ ျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္ မ်ားလာ တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ အမိုက္ စားေလးျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ေတြ တြက္ ေရႊမဘုံ ရဲ့ အလန္စား ဗီဒီယိုေလး ကို မၽွ ေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post အောက်ပိုင်း အတွင်းသား အလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုချပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ